ဒန်ပေါက်အလွယ်ချက်စားမယ် … easy cook | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ဒန်ပေါက်အလွယ်ချက်စားမယ် … easy cook
ဒန်ပေါက်အလွယ်ချက်စားမယ် … easy cook
Posted by weiwei on Jul 7, 2012 in Food, Drink & Recipes | 28 comments
ရန်ကုန်မှာဆိုရင် ဒန်ပေါက်ကို အလွယ်တကူဆိုင်မှာဝယ်စားလို့ရနိုင်ပေမယ့် နယ်မြို့မှာနေသူများနဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာနေသူများအနေနဲ့ ဒန်ပေါက်ကောင်းကောင်းစားချင်ရင် ကိုယ်တိုင်ချက်စားမှသာ အဆင်ပြေပါတယ်။ ထမင်းပေါင်းအိုးနဲ့တင် အလွယ်ချက်စားနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုကို စမ်းသပ်ချက်စားကြည့်ပြီး မိသားစု ၄ ယောက်စာ အလွယ်တကူချက်စားနည်းလေး မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
ကြက်သားနဲ့ထမင်းကို ခွဲပြီးချက်ထားပါတယ် … ကြက်သားချက်နည်းအတွက် ပို့စ်တင်ပြီးသားမို့လို့ ထပ်မရေးတော့ဘူးနော် ..
ဆန် …. နို့ဆီဗူး ၂ ဗူး
ထောပတ် …. စတီးဇွန်း ၃ ဇွန်း
သစ်ကျားပိုး၊ ကရဝေးရွက်၊ လေးညှင်း၊ စမုံစပါး၊ ဖာလာစေ့၊ နာနတ်ပွင့် … အနည်းငယ်စီ
ကြက်သွန်နီကြော် …. အနေတော် ၃ လုံးစာခန့်
ဆား၊ သကြား …. သင့်တော်သလိုထည့်ရန်
အရောင်မှုန့် … အရည်ဖျော်ပြီးသား နဲနဲ
ပဲစိမ်းစေ့၊ သီဟိုစေ့၊ စပျစ်သီးခြောက်များကို နှစ်သက်ပါက ထည့်လို့ရပါသည်။
ဆန်ကိုရေဆေးပြီး ယခင်ထမင်းချက်နေကျအတိုင်း ဆန်နှင့်ရေအချိုးအတိုင်း ထမင်းပေါင်းအိုးထဲတွင် ထည့်ပြီးချက်ပါမယ်။ ရေစဆူသည့်အချိန် တစ်ဖက်မီးဖိုပေါ်တွင် ထောပတ်ဆီပူအောင်တည်ပြီး သစ်ကြားပိုး၊ ကရဝေးရွက်ထည့်ပြီး ၂ စကန့်လောက်ဆီသတ်ပါမယ်။ ပြီးရင် လေးညှင်း၊ စမုံစပါး၊ ဖာလာစေ့၊ နာနတ်ပွင့်တို့ကို ဆီပူထဲထည့်ပြီး ချက်ခြင်းမီးပိတ်လိုက်ပါမယ်။ ဆီသတ်ပြီးသားအားလုံးကို ထမင်းအိုးထဲထည့်၊ ဆား၊ သကြားထည့်ပြီး ယောင်းမနှင့်မွှေပြီး ခဏနှပ်ပါမယ်။ အားလုံးကျက်ခါနီးအချိန်မှာ ဆိုးဆေးနဲနဲ၊ ကြက်သွန်နီကြော်ထည့်မွှေပြီး အိုးပိတ်ကာ ပြန်နှပ်ထားပြီး ထမင်းအိုးခလုပ်တက်ပြီး ၁၅ မိနစ်လောက်နေရင် အနံ့အရသာပြည့်စုံတဲ့ ဒါန်ပေါက်ထမင်းရပါပြီ။ ပူစီနံရွက်ဝယ်လို့အဆင်ပြေပါက ထမင်းနပ်ခါနီးမှာ ပူစီနံရွက်နဲနဲထည့်ပြီး နှပ်စားပါက အနံ့ပိုကောင်းပါတယ်။
ကြက်သားဟင်းကို သီးသန့်ချက်ထားပါတယ်။ သရက်သီးသနပ်၊ ဘလချောင်ကြောင်၊ သခွားသီးအချဉ်နှင့် ချဉ်ပေါင်ဟင်းရည်တို့နှင့် အလွန်လိုက်ဖက်ညီသည့် ဒန်ပေါက်ထမင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ကြက်သားဟင်းပါ …
ရန်ကုန်မှာတော.ဆိုင်တွေစုံနေပြီ ….. ဒီလိုချက်တော.လဲလွယ်သား
တစ်ခုလေးသိချင်သေးတယ် …အပန်းမကြီးရင် ကြက်သားနဲ.ရောချက်တဲ.အစိမ်းဖေါက်ဆိုတာလေး
သိချင်သေးတယ် …အဆင်ပြေတဲ.အခါ တင်ပေးပါဦး ။ အိမ်က မဒမ်မရှိတဲ.အခါ ကိုယ်.ဘာသာချက်
အစိမ်းဖောက်ဒန်ပေါက်ကတော့ ကျွန်မတစ်ခါ စမ်းလုပ်ကြည့်တာ အီတောက်တောက်ကြီးဖြစ်ပြီး စားလို့မကောင်းဖြစ်သွားလို့ နည်းမပေးတော့ပါဘူး …
ချက်တတ်ရင် ကိုယ်တို်င်ချက်စားတာနဲ့ ဝယ်စားတာ ဘယ်တူပါ့မလဲ။
အားပေးသွားတယ် ဝေဝေ ရေ။
ဒန်ပေါက်လည်း စားချင်၊ သွေးကလည်း နည်းနည်း တိုးနေတတ်တော့ မစားရဲ။
အခုတော့ ဟန်ကျပြီ လက်တည့်စမ်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်။
good marketing and good guide for cook !
i’ll copy for my wife!
တီတီ ဝေ ရေ .. လက်မ တစ်ချောင်းပါနော် .. ကျွန်တော် က ကြေးအိုးပြုတ် ကို ပိုကြိုက်တယ်။ .. ဒါပေသိ .. ဒန်ပေါက် လဲ သူများ ကျွေးရင် စားပါတယ်။ ခုလို အငတ်ငတ် အပြတ်ပြတ် ဖြစ်နေတဲ့အချိန် မှာဒန်ပေါက် ပိုစ့် လေး တင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ …. အဲဒါလေး ကြည့်ပြီး ရေ သောက် ရမယ်ဗျို့။
သစ်ကျားပိုး၊ is I believe wrong spelling, it should be သစ်ကြံပိုး
sorry I am younger brother of Ma Ma.
အငတ်ငတ်အပြတ်ပြတ်နဲ့လို့ ရေးလိုက်တော့ တော်တော်တောင် သနားသွားတယ်။
အောင်မြင်မှုတစ်ခုဆိုတာ လွယ်လွယ်နဲ့ မရနိုင်တာမို့ ပေးဆပ်မှုတွေနဲ့ ကြိုးစားထား
မောင်ဆွေ (coz- I am younger brother of Ma Ma)
သတ်ပုံအဖွဲ့ဝင်တွေ တိုးလာလို့ ကြိုဆိုပါတယ်နော်။
သစ်ကြံပိုး ဆိုတာ တော်တန်ရုံ မသိကြတာများတယ်။
ခုတောင် မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်း သွားကြည့်ရသေးတယ်။
ရန်ကုန်လာရင် ကိုပေါက်နောက်က လိုက်ရမယ်။
ဝေဝေ့ပိုစ့်မှာ လာပြီး လျှာရှည်နေမိတယ်။
ကြည့်ရင်း သွားရည်ကျ လာပြီ။
ဒီတစ်ပါတ်ထဲ မှာ တစ်ရက်တော့ ဒန်ပေါက်လိုက်ဦးမယ်။
ဒီမှာ ချက်တော့ ချက်ဘူးတယ်။
ဒီလို နည်းတော့ မဟုတ်ဘူး။
ကြည့်ရတာ သဂျီးသားမက်က သဂျီးဘာသာ ပြောင်းသွားပြီထင်တယ်။
ဒံပေါက် ချက်ကျွေးရမယ် …
ဆန်က ဘာစတီးမား (အဟဲ မှားလျင် ခွေးလွှတ်ပါ) နှင့်ဆိုပါက ပိုကောင်းကြောင်း ကြားဖူးခဲ့ပါသည်။
ကိုလက်စတောတက်သူတွေ.. ပိန်ချင်သူတွေ.. ထိုင်းက.. ဂျက်စမင်းဆန်မစားပဲ.. ဘစမာတီဆန်ဝယ်စားကြတယ်..
ထမင်းချက်ရင်.. ထမင်းလုံးအရွယ်ရှည်တာတော့ တော်တော်ရှည်ပါတယ်..။
အဘ မိန်းမက ကျန်းမာရေးအတွက် ဘစမာတီ ဆန် စားလေ့ရှိတယ် ။
ဒါပေမယ့် အဲဒီ Basmati ဘစမာတီ ဆန်မှာ ဆိုးချက်တွေ ရှိတယ် ။
သူက ချက်ပြီးပြီးချင်း တစ်ရက်အတွင်း မစားနိုင်ရင် မာသွားတယ် ။
ဆန်ရှည်ချင်ရင်လည်း မချက်ခင် တစ်နာရီလောက် ရေစိမ်ရတယ် ။
အဘ တို့က ထမင်း တစ်ခါချက်ပြီးရင် ၊
နှစ်ရက်လောက်ထားစားတာဆိုတော့ အဆင်မပြေဘူး ။
အခု Thai Long Grain ပဲပြောင်းစားနေတယ် ။
ကျွန်မနဲ့ရင်းနှီးခဲ့ဖူးတဲ့ (ကျွန်မကတော့ ကုလားလို့ပဲခေါ်တယ်) နိုင်ငံခြားသားမူဆလင်တွေက ဒန်ပေါက်ကို ဘစမာတီဆန်မရရင် လုံးဝ ချက်မစားပါဘူး … သူတို့နိုင်ငံကနေအထိ ဆန်ကိုမှာပြီး ဆိတ်သားနဲ့ဒန်ပေါက်ထမင်း ချက်စားလေ့ရှိတယ် …
တရုတ်ပြည်မှာနေတုန်းကတော့ ဒန်ပေါက်ချက်ဖို့ ယိုးဒယားဆန်ကိုသုံးခဲ့ပါတယ် …
ကျွန်မချက်ကျွေးခဲ့တဲ့ ဒန်ပေါက်နဲ့ကြက်သားဟင်းကို တရုတ်တွေအရမ်းကြိုက်ကြတယ် ..
ကျေးကျေးပါ သူကြီးနဲ့ ဘဖောရေ ..အဲ့ ဒီလို ရှည်ရှည် မာမာ နဲ့ လှလှပပလေး ဖြစ်စေချင်လို့ ဘစမာတီ ဆန်နဲ့ချက်ကြတာပါ ။ ကိုလက်စထရောပါ နည်းတယ် ဆိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ချက်စားသူတွေ အတွက် သုံးသင့်ပါသည်။
့ဟေးးးးးးးးးး မြန်မာဖောင့်ပြန်ရပြီကွ…..မရတာ ကြာနေပြီ….
မဝေပိုစ့်မှာ မန်းချင်တာ မရလို့ မြန်မာစာတွေကို copy နဲ့ paste လုပ်ပြီးမန်းလိုက်ရတာ..
မြန်မာလိုရိုက်မရလို အင်ဂုလိလို ရိုက်မိတာ မြန်မာစာမေ့နေပြီလို့ပြောတဲ့သူလည်းကြုံရတယ်
မကြေနပ်တာနဲ့ တစ်ညလုံး ထိုင်လုပ်တာ …ခုတော့ ရပြီ.. ဒိနေ့မှစ ပြီး တွေ့သမျှ အကုန် လိုက်မန်းတော့ မည် ဖြစ်ပါကြောင်း….
အဘဆွေကို မတွေ့တာကြာပြီး အခုပြန်တွေ့ရလို့ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ် …
ကွန်မန့်အတွက် ကျေးဇူးပါ ..
ယူကေမှာ ကုလားများသောကြောင့် အနှီ ဘက်စမက်တီ ကို သာသုံးစွဲမှု များပါသည်။
မြို့ကြီးပြကြီးများတွင်သာ ဂျပ်စမင်ရိုက်စ် ဝယ်ယူရရှိ နိုင်ပြီး ဘဆွေတို့နေသောတောဘက်တွင်မရှိသလောက်ရှားပါသည်။
ရှိပြန်လျှင် လည်း တစ်ကီလို သုံးပေါင် လောက ်ပေး ရ ပြီး ငါးခြောက် လ္ဘက် ငါးပိကြော် တို့နှင့်စားရန် စွန့်စားဝယ်ယူရပါသည်။
ဦးနေဝင်းတန်ခိုးထွားတုန်းက.. နိုင်ငံခြားက ဘစမာတီဆန်ကို.. တကူးတကမှားစားခဲ့ဖူးတယ်..
ဘစမာတီဆန် .. တားတား တို့တော့ မကြိုက်ဘူး ဘောပျက် ဘောပျက်နဲ့ …ထိုင်းဆန်ကလဲ အေးသွားရင် သွားကြိုးမတက်…
ပန်းတနော်က ဆန်ပဲ ကောင်းတယ် နော် မမ နော်…
အမှန်ကတော့ ပန်းတနော်က ဧရာဝတီတိုင်း၂၆မြို့နယ်မှာ ဆန်အထွက်အနည်းဆုုံးပါ။
မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်ပေါများလို့ ရေထွက်ကုန်ပဲ များပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက သင်ခြံတွေများပြီး သင်ဖြူးထွက်တယ်။
ရန်ကုန်မှာလည်း အခုတော့ အလွယ်တကူ ဝယ်လို့ရနေပါပြီ ။။
ဈေးတော့ ဘယ်လိုကွာတယ် သိဘူးရယ် .. city mart ၊ ocean super mart မှာ ရပါသည်။
city mart ကနေ ရယ်ဒီမိတ်ထုတ် ဝယ်ချက်ဖူးတယ်…
ချက်နည်းလဲပါတယ် ဆိုတော့ အဆင်ပြေသွားတယ်…
ရယ်ဒီမိတ်ချက်သလိုမျိုး ကိုယ့်ဟာကိုယ် အလွယ်ချက်လို့ရတယ် …
ဈေးထဲက ဒန်ပေါက်မဆလာရောင်းတဲ့ဆိုင် ဒါမှမဟုတ် ပရဆေးဆိုင်လိုမျိုးမှာ ဆန်တစ်ပြည်အတွက် ဒန်ပေါက် အမွှေးနံ့သာစပ်ပေးပါဆိုရင် အစအဆုံး သူတို့စပ်ပေးလိုက်တယ် …
အရောင်တင်အမှုန့်သီးသန့်ဝယ်ရင်လဲရတယ် .. ဒါပေမယ့် အရောင်တင်မှုန့်ကို လက်နဲ့မထိမိအောင် သတိထားပြီး နဲနဲလေးပဲ သုံးရပါတယ် ..
ဘယ်လို လွယ်လွယ်ချက်နည်းပြောပြော ဟင်းချက်တာ ပါရမီမပါလို့လား မသိဘူး။
ဝေဝေ ချက်ကျွေးသလောက်ကို စားမကောင်းဘူး။
အဲဒီတော့ ချက်နည်း မကူးတော့ဘူး။ချက်ကျွေးတာဘဲ စားတော့မယ်။